Xildhibaan ka tirsan BF oo lagu dhex garaacay Nairobi lana dhigay isbital - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaan ka tirsan BF oo lagu dhex garaacay Nairobi lana dhigay isbital
Xildhibaan ka tirsan BF oo lagu dhex garaacay Nairobi lana dhigay isbital
Nairobi (Caasimada Online)-Ciidamada dalka Kenya ayaa lasoo sheegayaa inay jir dil xoogan u geysteen Xildhibaan Maxamuud Sheekh Siraaji oo ka tirsan BFS, lana dhashay allaha u naxariistee Wasiirkii la dilay ee Cabaas Sheekh Maxamuud Siraaji.
Qorshaha ciidamada Booliska Kenya ayaa la sheegay inuu ahaa inay toogtaan Xildhibaanka iyo dadkii kale ee la socday, hase ahaatee uu ka badbaadiyay kadib markii saaxiibkii uu kusoo dajiyay Xaafadda Westland ee magaalladda Nairobi.
Gaariga uu la socday Xildhibaan Maxamuud Sheekh Siraaji ayaa noociisa ahaa ‘’toyota rav4’’, mana kala cadda sababta ay Boliska Kenya u beegsadeen.
Sidoo kale, Gaariga ay baadi-Goobayeen ciidamada Kenya ayaa noociisa ahaa ‘’toyota lexus’’ oo loo sheegay in laga soo xaday Kiambu.
Docda kale, Dowlada Somalia iyo Safaarada Somalia ee Kenya ayaan weli ka hadal dhibaatada loo geystay Xildhibaan Maxamuud Sheekh Siraajioo hadda yaal Isbitaal ku yaalla Nairobi.